Kushanda Zvakachengeteka muInternet Banking | Ehupfumi Zvemari
Shanda zvakachengeteka muInternet kubhengi
Jose recio | | Banca, General hupfumi
Masangano emari ane masystem ekuchengetedza kuitira kuti ruzivo pakati pebhangi nemutengi ruve zvakavanzika, zvichidzivirira kuverenga kwaro kana kumisikidzwa nevechitatu. Mamwe mabhangi uye ekuchengetedza mabhengi anotendera mutengi tarisa komputa yako michina, Kuti uone kuti iwe unogona kuita chero mhando yemabhengi mashandiro nekuchengeteka kwakazara. Imwe sisitimu inoratidzira kuratidza nguva uye zuva rekubatana kwekupedzisira, kuitira kuti uone kana kwave nekupinda kunze kwemutengi.
Tekinoroji nyowani dzinoshandiswa kubhengi dzaita kuti zvive nyore kune vashandisi kuwana uye kushandisa maakaunzi kubva kune chero komputa kana runhare. Asi kana mushandisi akasateedzera nhevedzano yekudzivirira iyo matsotsi emakomputa vanogona kutyora kupinda kumaakaundi ako. Ndosaka masangano evatengi nemasangano emari pachawo achikurudzira vashandisi verudzi urwu rwebasa kuti vatore nhanho dzekuchengetedza kudzivirira vashandisi kubva mbavha dzemakomputa ita kuti zvinangwa zvako zvizadzike.
Chekutanga pane zvese, kana uchisarudza chinzvimbo chekudyara mari kana kuita chero rudzi rwebasa rekubhengi kuburikidza nemambure, inofanirwa kuve nechokwadi chekuti yakanyoreswa muRejista yeZvezvinhu zveBhangi reSpain, National Securities Market Commission (CNMV) kana General Directorate yeInishuwarenzi, uye kuti inobvumidzwa kushanda zviri pamutemo.
1 Kubhengi kwepamhepo: matanho ekuchengetedza
2 Chitupa chekuchengetedza
3 Anowana hutachiona
4 Maitiro ekuchengetedza
5 Dzivisa njodzi
6 Tora ruzivo
7 Basic matipi
8 Zvinokurudzira nezve komputa yako
Kubhengi kwepamhepo: matanho ekuchengetedza
OCU inoyeuka kuti vatengi vemabhengi pamusoro mutsetse, vanogona kuve pachena kune vanobiridzira, saka vanofanirwa kutora matanho akanyanya kuburikidza nhanho dzezviyero, pakati pazvo zviri: gara uchivanza mapassword; shandisa zvisina kujairika makodhi ekuwana (zvinosanganisa kusanganisa manhamba uye mavara, asi usingashandisi kune akajeka manhamba); dzivisa kupinda kubhangi kubva kumakomputa eruzhinji.
Tarisa kuti uri kuongorora nemapeji akachengeteka (padiki inowoneka pazasi kurudyi); kwete kusiya komputa kusvika chikamu chapera uye dzima gare gare. Chekupedzisira, zvinosimbiswa kuti zvakakosha kuti mabhurawuza avandudzwe nezvirongwa zvekuchengetedza uye mawindo emoto, pamwe nekuchengetedza kana kupurinda kopi yechiitiko, seuchapupu.
Mabhangi eSpain seari yose parizvino ari kupa yakanakisa nzira dzekuchengetedza kuchengetedza vatengi vavo kubva pakurwiswa nematsotsi emakomputa. Chimwe chezvishandiso izvi chitupa chekuchengetedza chinovimbisa kuchengetedzeka uye data zvakavanzika izvo zvinochinjana pakati pemutengi pamwe nesangano remari Kana kana uchiwana sevhisi, bhurawuza risingazive chitupa ichi, zvinoratidza kuti chapera, saka chinofanirwa kuvandudzwa pakombuta nekudzvanya kaviri pa "padlock" inoonekwa pazasi pechidzitiro nekudzvanya " gadza chitupa ".
Nezve kufambiswa kweruzivo pakati pemushandisi komputa uye sevha dandemutande yebazi rezvemari, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvinoitwa kuburikidza neSSL encryption protocol (Yakachengeteka Socket Leyer) of 128 chidimbu, iyo yakanyanya encryption iripo ikozvino. Aya ese matanho kudzivirira vatatu Unogona kuona kana kugadzirisa data rakataurwa.
Uye zvakare, kuti uve nechokwadi chekuti urikushanda pawebhusaiti yakachengeteka, kero yeiyo peji inofanira kutanga ne "httpS". Saizvozvowo, "rakavharwa rakavharwa" kana "kiyi" rinofanira kuoneka pasi pechiso. Aya maturusi anowanikwa kumabhangi uye ekuchengetedza mabhengi anotendera zvakapetwa kaviri, kune rumwe rutivi, kuti mutengi arikutaurirana dhata ravo kune server server yenzvimbo yemari uye kwete kune chero imwe inoedza kuzviita. Uye pane imwe, iyo pakati pemutengi uye nevhareji yepakati iyo data "inofamba" yakavharidzirwa, ichidzivirira kuverenga kwayo kunogona kuitiswa nevanhu vechitatu.
Masangano emari muSpain mukutarisana nekuwedzera kuri kuwedzera mumavhairasi emakomputa uye spyware (spyware yakasara zvisina kufanira kuiswa, uye izvo zvinogona kutora ruzivo rwemunhu uye rwemari rwemushandisi) izvo zvinogona kukanganisa mashandiro emabhangi anoitwa nezviuru nezviuru zvevashandisi vafunga kuwedzera nekuvandudza matanho ekuchengetedza mune avo dandemutande, umo mavanopa ruzivo runoshanda pane chero dambudziko rinoitika kumutengi.
Pane kushanya kwemapeji webhu yemabhangi uye ekuchengetedza mabhengi, zviri pachena kuti mazhinji acho ane madhipatimendi akanangana nenyaya yekuchengeteka, umo mushandisi, kunze kwekugamuchira ruzivo nezvedanho rinofanira kutorwa mumamiriro ezvinhu aya, anowana tsananguro nezve chengetedzo iyo kubhangi kana bhengi rekuchengetedza rine, pamwe nemasevhisi avanopa.
Iyo inonyanya kugadzirisa ndeye iyo Bankinter yakatanga nekugadzira hutachiona scanner hunyanzvi mune yemari nharaunda inowanikwa kune vatengi vayo, zvachose mahara. Iyo yekuuraya nguva iri pasi pe 30 masekondi, ichigadzirisa otomatiki mune yega yega kuuraya. Iyi yekutsvaga injini inoshandisa tekinoroji nyowani mumamiriro pamusoro mutsetse, uchiona aya mavhairasi ari kumhanya pakombuta yako panguva yekuongorora. Nenzira iyi, mushandisi anogona kuishandisa semubatsiri kune yavo yechinyakare antivirus.
Inoda Indaneti Explorer 5.5 kana vhezheni dzapashure. Kana uchivhura kuongororwa kwemidziyo, kurodha pasi kwerudzi rwefaira kunoitwa Anoshanda X maitiro ayo anogona kutora masekondi mashoma, panguva iyo antivirus kuuraya skrini ichasiiwa isina zvemukati. Iyo zvakare ine chimwe chishandiso chekuwedzera kuchengetedzeka mumabasa anoitwa nevatengi vayo.
Inosanganisira kupinda mukati mekodhi kiyi yako kiyi nguva yega yega mushandisi paano saina oparesheni, inoitwa uchishandisa graphic panel, sisitimu iyo inokutendera iwe kuti udzivise njodzi yezvirongwa zvinozivikanwa se "Trojans", inoedza kutora ruzivo nekudzvanya iyo keyboard. “Isu tinoisa masystem edu ekuziva nguva nenguva, mukati nekunze.", Nongedza kubva kuBankinter.
Kuitwa kwezviyero izvi zvekuchengetedza zvinobvumira vatengi vanoshandisa kubhengi pamusoro mutsetse Ivo vari munzvimbo yakachengeteka uye zviitiko zvaunoita, kubvunza maakaundi ako ega, kuwedzerwa, kutengeswa kwemasecurity, nezvimwewo, zviri munzira inogutsa zvachose pasina kushamisika kwakashata. Ndicho chikonzero masangano mazhinji afunga kuwedzera aya masisitimu. Iyi ndiyo kesi yaBanco Sabadell, iyo yakatanga kushandisa iyo siginicha yemagetsi pane yako mae-mail. Iyi nzira inovimbisa kuzivikanwa kwemupi, uyo akagamuchira kusimbiswa kweemail kero kuburikidza nesiginecha yemagetsi kuburikidza nedhijitari chitupa chiremera, uye kuti, panguva imwechete, “Nehunyanzvi hunovimbisa kuti zvemukati memessage hazvichinji mukufambisa nevechitatu", Vanosimbisa kubva kubhangi reVallesano.
Dzimwe nzira dzinoshanda idzo dzekuSpain kubhengi kwave kuvandudza kudzivirira mapato echitatu kuti aone kana kutora ruzivo rwatsinhaniswa, kupa kwakanyanya kuchengetedzeka inzira ye otomatiki kudambura, iyo inodimbura mushandisi muchiitiko chekuti maminetsi mashoma apfuura asina kuita chero kuvhiya, pamwe nekuonekwa mune dandemutande yezuva uye nguva yekubatana kwekupedzisira, kuitira kuti mutengi aone kana paine kubatana kusati kwaitwa nako. BBK uye "la Caixa" ndeimwe yemasangano mazhinji emari akasarudza kushandisa ino sisitimu yekudzivirira kubiridzira pamusoro peInternet.
Imwe misiyano ndeye inoshandiswa na "la Caixa" kune avo vanhu vanoshandisa "Línea Abierta", ichivadzivirira kuburikidza ne "CaixaProtect ”, iyo ine hurongwa hwekudzivirira kubva kubiridzira kana kuba, "Pasina kutora chero basa kana mari yekushandisa zvehunyengeri nemutengi."", Ivo vanotsanangura kubva kuchinhu. Ziviso yekukasira inongodiwa chete kana kukanganiswa kwaonekwa. Imwe yemabhenefiti ayo makuru ndeyekuti "Kana tine nhamba yako mbozhanhare, tinokuzivisa nekukwirisa mashandiro akaitwa nemakadhi ako kana paLínea Abierta kuburikidza nemeseji yeSMS ”.
Chekupedzisira, pane akateedzana ezvekurudziro kuitira kuti kuchengetedzwa kwekombuta uye neruzivo irwo rwugutse.
Isa iyo antivirus system pakombuta uye chengetedza zvachose.
Dzivisa kuvhura maemail asina kuzivikanwa mabviro.
Zorodza komputa yako wega neazvino ekurudziro ekuchengetedza ekuvandudzwa kweiyo yako inoshanda system uye browser.
Iwe haufanirwe kuisa chero Software yechinyakare kana yekufungidzira mavambo.
Saizvozvo, ivo vanoratidza kuti iwe unofanirwa kugara uchitarisa kuti iyo data yakapinda pasi pe chengetedza kubatana (apo chiratidzo cheyakavharwa padlock chikaonekwa mubrowser yako). Kana kubatana kuchigadzirwa kubva kuruzhinji kana komputa yakagovaniswa, cache yebhurawuza (mafaira epamhepo eInternet) inofanirwa kujekeswa kubvisa chero data rakapinda. Izvo zviri nyore kuwana bhangi zvakananga kubva kubhurawuza rako (nekutaipa kero yebazi rezvemari) uye kwete kubva kune zvinongedzo pamapeji zvinopa kuvimba kudiki. Uye yeuka kuti iyo "Mushandisi Kodhi" uye "Rwekutanga password" idunhu rega uye zvakavanzika, izvo zvavanokurudzira kuti zvichinjwe nguva nenguva.
Zvinokurudzira nezve komputa yako
Kudzivirira ndicho chombo chakanakisa chinoshandiswa nevashandisi veInternet kubhengi kuchengetedza hunhu hwavo, kuburikidza nemaitiro ari nyore anochengetedza michina yemakomputa kubva pakurwiswa kwekunze kunogona kukanganisa chero kufamba kwebhangi kunoitwa. Izvi ndezvimwe zvacho:
Ita kuti bhurawuza racho riwedzere.
Nguva nenguva bvisa Cookies yekomputa.
Gadzira makopi ekuchengetedza uye chengetedza iyo yekushandisa system kusvika parizvino nezvazvino zvitsva.
Usagovana mafaera kana maprinta nevechitatu mapato.
Nguva nenguva tarisa mapeji akashanyirwa. Uku kuvhiya kunogona kuitwa nekubvunza iyo "Nhoroondo" sarudzo yebrowser.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Shanda zvakachengeteka muInternet kubhengi
Kuchengetedzwa kweSpanish kwakanyanya kuratidzwa kuArgentina
Sarudzo kuSpain neItaly gore risati rapera?